लोक गायिका डिला बिकका, बुबाको असामयिक नि'धन -
Homeसमाचारलोक गायिका डिला बिकका, बुबाको असामयिक नि’धन
लोक गायिका डिला बिकका, बुबाको असामयिक नि’धन
April 30, 2021 admin समाचार 504
लोक गायिका डिलालाइ पितृ शोक परेको छ। केहि दिन अगा’डी उनको बुबाको अस’माहिक नि’धन भएको हो। लामो समय देखि अस्वस्थ रहेका डिलाको बुबाको अक’स्मात स्वास्थ्यमा थप खरा’बी आएपछि उपचारको क्रममै नि’धन भएको पारिवारिक श्रोतले जान’कारी दिएको छ।
दोहोरी क्षेत्रको सबै भन्दा प्रिय गा’यिका बनेकी डिला यो बेला पि’डामा परेकी छिन। डिला राजधा’नीमै बस्दै आएकी थिइन। धादिङ्गमा बिहे गरेकी डिला अहिले दोहोरी च्या’म्पियनमा पनि प्रतिष्पर्धामा छिन भने उनि सबैको मन मुटुमा बसेकी गायि’का पनि हुन्।
डिला बुबाको उपचा’रमा आफै खट्दै आएकि थिइन सामान्य परिवारमा हुर्केकी डिलालाइ बाबाको मात्रै हैन सिंगो परि’वारको भार थियो। बुबा बचाउन नस’क्दा निकै दुखित रहेको उनले फेसबुकमा खु’लाएकी छिन। उनले फेसबुकमा बुबाको सम्झ’नामा यस्तो लेखेकी छिन :
धेरै कोशि’श गर्दा पनि हामिले काल लाइ जित्न सकेनौ पापि दैब ले हाम्रो खुशि हामि बाट खोसेर हामि लाइ टु’हुरो बनाएर लगेको छस जसरि हामि बाट टिपेर लगे’को छस त्यसरि नै स्वर्गमा बास दिएस (miss you buwa) भौतिक शरिर हामि सङ्ग नरहे पनि ह’रपल हाम्रो सम्झना मा रहिर:हनु हुनेछ, बैकुन्ठ मा बास होस । – इताजाखबरबाट
‘फुलबुट्टे सारी’ गाउने अफ्रिकी गायिकाले गइन् फेरि अर्को नेपाली गीत, केहि क्षणमै बन्यो भा’इरल (भिडियो हे’र्नुहोस)
“भगवानले दिएको एउटा छोराले हेला गर्‍यो, अब बाँचुन्जेल आश्रममै बस्छु”
आज मिति २०७७ पुस २८ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
January 12, 2021 admin समाचार 2652
मेष मनोर’ञ्जनका साथै धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउला । वैदेशिक क्षेत्र’को काम अघी बढ्नेछ । उपहार प्राप्त होला । शुभका’र्यको चर्चा चल्नेछ । बृष लाभ,हानी, आय,व्यय, सुख,दुख वरा_वरी मध्यम खालको
नि’षेधाज्ञामा एम्बुलेन्स चाहियो ? यि नम्बरमा फोन गर्नु’होस् महानगरका १० एम्बुलेन्स नि:शुल्क सेवामा छन्
April 30, 2021 admin समाचार 299
कोरोनाको महा’मारी दोस्रो चरणमा पनि फैलिएपछि सरकारले विशेष सतर्कता अपनाएको छ । काठमाडौमा कोरोना सं’क्रमित भइ अस्पताल जानु पर्ने अवस्था’हरुका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिइएको छ । महानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको अवधिभर महानगर’बासिलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उप’लब्ध
रचना रिमालको जन्म’दिनमा रातको १२ बजे शिशिर भण्डारीले अच’म्मको उपहार दिए । आमा सम्झेर रचना भा’वुक भईन् (भिडियो हेर्नुस)
August 18, 2020 admin समाचार 11025
यतिबेलाकी च’र्चित गायिका रचना रिमालको आज जन्म’दिन हो । आजदेखि रचना १८ बर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । युट्युब मिडियामा चटप’टेवाली गायिका भन्ेर चर्चामा आएकी रचना पछि नेपाल आईडलमा भिडिन् । नेपाल आईड’लमा सबैको माया पाएर
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171435)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165405)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164870)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164845)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163882)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162381)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161978)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160431)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155310)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145418)